I-LG iya kulinda ithutyana ukuba isungule i-smartphone yayo esongwayo | I-Androidsis
I-MWC 2019 eyenzeka ekupheleni kwenyanga iya kuba nayo I-5G kunye nokusonga ii-smartphones njengezona zinto zimbini ziphambili. Iimpawu ezininzi ziya kuba kulo msitho kunye nezinye zazo. IHuawei iya kuzisa i-smartphone yayo esongwayo apho, nangona ngokuqinisekileyo ayizukuphela kwayo. I-LG yenye yeempawu kwindawo leyo, ekulindeleke ukuba ifike kunye nale modeli, nangona kubonakala ngathi ayizukwenzeka.
Kwakucingelwa ukuba le LG yefowuni yayiya kuyo fika ekuqaleni konyaka. Yayisaziwa iinyanga ukuba uphawu lwaseKorea Ndiqale ukusebenza kwifowuni enjalo. Kodwa ukufika kwayo kwintengiso kuya kufuneka kulindwe ixesha elide ngaphandle kokucinga. Kuba ifemu ayingxami kule nto.
Njengoko sele usazi, zininzi izinto ezicwangcisiweyo ukumiliselwa kweselfowuni esongekayo kuwo wonke lo nyaka. Sele sinayo eqokelelwe kwixesha elidlulileyo uluhlu lweempawu. I-LG ibingomnye wabo, nangona inkampani yaseKorea ingenanjongo yokuyazisa ngalo mzuzu. Bakhetha ukulinda kwaye babone ukuba zenziwa njani ezinye iibrendi malunga noku.
Bayakujonga oko Ibango kweli candelo lentengiso aliphezulu kakhulu kule mihla. Ke ngoko, bakhetha ukulinda ithutyana kweli candelo lentengiso ukuba liqhubele phambili kancinci. Ukongeza, inkampani ithe nangona iprojekthi ingakhange irhoxisiwe, okanye ukuphuhliswa kwesi sixhobo, ayisiyonto iphambili okwangoku. Njengoko besitshilo, ibango langoku liya kuba sisigidi esinye kwiimarike zokusonga ii-smartphones.
Ke ngoko, ithembisa ukuba iza kuba sisiqingatha sentengiso esincinci ngoku. Ke ukubakho kuyo ayisiyonto iyakuba yinto ephambili kwi-LG. Ke ngoku kuya kufuneka silinde ithutyana. Akubonakali ngathi le fowuni yokusonga iza kuphehlelelwa ngo-2019 ezivenkileni. Ngokuqinisekileyo unyaka olandelayo uya kuba sesikweni. Okwangoku, i-LG ifuna ukugxila kwamanye amasimi. Banolunye uthotho lwemiba ebaluleke kakhulu ngala maxesha.
Ngaphezu koko Ukubuyisa isikhundla sakho kwintengiso yinto ephambili kwinkampani yaseKorea. Kudala baneziphumo ezibi kule ndawo yocingo, eyongeza ilahleko usozigidi. Ngaphandle koko, i-LG iyaqhubeka nokusungula ii-smartphones kwimarike. Inkampani ikholelwa ekubeni kusekho indawo yokufumana kwakhona ukubaluleka kwayo kweli candelo lentengiso namhlanje. Ke ngoko, balindile Iindaba zecandelo lakho kwi-MWC.
Inkampani Ndiyathemba ukuba i-5G izakuba yinto ebancedayo koku kubuyela encotsheni yentengiso kwi-Android. Okwangoku, njengakwezinye iimveliso ezinje ngeSamsung, inkampani ihlaziya uluhlu lwayo. Ukongeza ekusebenzeni kuzo zonke iintlobo zobuchule. Ke banethemba lokuba oku kuya kunika iziphumo ezilindelekileyo kwaye baphinde babuye kwindawo yabo kwintengiso. Ngokukodwa emva kwenani elibi lokuthengisa ababenalo kunyaka ophelileyo.
I-LG kunye ne-Sony yimizekelo emibini elungileyo yeempawu ezithi balahlekelwe bubukho bemakethi. Zombini zifuna ukuxhomekeka kuphuculo olutsha kunye nokuqhubela phambili kwe-5G kwi-Android ukuze bafumane umhlaba othile abaphulukene nawo kule minyaka idlulileyo. Nangona ukhuphiswano oluvela kwiimpawu zaseTshayina lukhulu namhlanje. Okwenza ukuba le nkqubo ibe nzima kuthi sobabini. Kodwa okomzuzwana akukho namnye kubo oyekile ukwazisa ii-smartphones kwimarike, into ebaluleke kakhulu malunga noku.
Ke ngoko, kwimeko ye-LG, uphawu lwaseKorea luya linda ukubona iziphumo okhuphisana nabo kwimarike ngeefowuni zabo ezisongelayo. Ngokusekwe koku, baya kubona xa beza kuyazisa eyabo i-smartphone kwintengiso. Abangxami okwangoku, kuba bayazi ukuba banezinye izinto eziphambili ngokubaluleka okwangoku. Khumbula, nge-24 kaFebruwari sinesivumelwano kunye ne-LG eya kuthi ibonise iindaba kwi-MWC 2019 e-Barcelona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » LG » I-LG ayizukuvula i-smartphone esongelayo okwangoku
I-Quest Town Saga yiKairosoft entsha njenge-RPG yesiqhelo kuyo yonke imiba yayo